Dhibaatooyinka mashiinka (#3, ama # 3 & 4)
Su'aal Dhibaatooyinka mashiinka (#3, ama # 3 & 4)
1 sano 6 bilood ka hor #851 by PAYSON
Hada, waqti dheer ayaan ahaa tan iyo markii aan halkaan joogay. Waxaan qabaa laba dhibaato. Marka hore, waxaan bedelay kombiyuutarada. Taas ka dib, qaar ka mid ah jadwallada ay jecel yihiin ayaa soo dejinaya dhammaan maqaarka cad. Ma ahan wax qumman, ma jiro gudaha (barkad ama kale) Ma duubi karo iyada oo aan loo baahnayn qalabka korontada 2. Marka labaad, uma muuqan karo in aan helo mashiinno badan oo shaqeynaya, waxaan isticmaali karaa hal ama hal mishiinka oo aan si qaldan u isticmaali karin, laakiin waa 3rd ama 3rd iyo 4th, oo kaliya laba shaqo, waxaan runtii jeclahay duulimaadka Dash 7, laakiin kaliya mashiinka bidixda ayaa kor u kaca, waxaanay ka shaqeeyeen xayawaan laakiin taasi waa dhantahay.
1 sano 6 bilood ka hor #852 by Dariussssss
Waxaan u baahanahay macluumaad badan oo dheeraad ah. Diyaarad noocee ah, nooca FSX iwm ... Miyay diyaaradu diyaar u tahay buuggan, miyaad raacdey iyo sidoo kale ... Taasi waa sida kaliya ee lagu caawiyo.
1 sano 6 bilood ka hor #855 by PAYSON
Waxay u egtahay inaad ka luntay jawaabtayadii hore. Dhammaan waxan u sameeya buuggan iyo / ama "akhrista". Ilaa hadda sida diyaarad gaar ah, waxaan u maleynayey inaan dhahay, diyaarad kasta oo ka badan makiinada 2. Waxaan sameeyn karaa X-56 xakamaynta xakameynta duulimaadka hal waddo, ka dibna mid kale. Isbeddel kastaa wuxuu saameyn ku yeeshaa dhamaan mashiinnada bidix ama makiinadaha saxda ah oo dhan si ay u joogaan xayawaanka inta ay kuwa kale isku riixayaan. Waxaan isticmaalayaa sfx faaruq ah. Anigu waan kula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku haystay dhibaato waqti dheer ka hor, waadna i caawisay midkaas. Waxaan raaligelinayaa inaan wakhtigaaga u qaato xaaladdan, kaliya waxay u maleeyeen in qof uu lahaa dhibaato isku mid ah oo la daaweeyey. Waxba ma jecla inuu ka jawaabo su'aalahaaga.
Raali gelinta iyo danta, PAYSON
1 sano 5 bilood ka hor #869 by PAYSON
Waxaan isku dayi doonaa meelo kale. Thanks.
1 sano 5 bilood ka hor #870 by PAYSON
Whooooa !!! Waxaan helay habka saxda ah ee loo dejin lahaa qalabka la adeegsanayo 1 6. Waxay ahayd mid fudud. Waad ku mahadsan tahay caawinta :-(
1 sano 5 bilood ka hor #872 by Gh0stRider203
wadaagaan marka ay dadka kale dhibaatadan qabaan?
1 sano 5 bilood ka hor #873 by PAYSON
Waxaan u baahan lahaa macluumaad badan oo dheeraad ah. Diyaarad noocee ah, nooca FSX iwm ... Miyay diyaaradu diyaar u tahay buuggan, miyaad raacdey iyo wixii la mid ah ... Taasi waa habka kaliya ee lagu caawiyo. Habka xakamaynta duulimaadka, iwm.
1 sano 5 bilood ka hor #874 by PAYSON
Dhab ahaan, dhammaan macluumaadkaas looma baahna. Qof kasta oo isticmaalaya X-55 ama X-56 Saitek Advanced Nidaamka xakamaynta duulimaadka oo ay la kulmaan awoodaha 1 & 2 xaddidan, Waxaan helay wixii aan u malaynayo inuu yahay daaweynta. Waxaan soo diri lahaa tan horraantii, laakiin waxay qaadataa wakhti aan ku celceliyo waqtiyadan 20 si ay u caddeeyaan in uu shaqeynayo. Waxay shaqeysaa. Si fudud u fur furaha "goobaha", u tag jaranjarada. Qaado dhammaan goobaha, marka goobaha gawaarida ay gebi ahaanba ka baxaan, iyo gawaarida laftiguba waxay joogaan booska aanad lahayn (hubi inaad ka tagto pin-tuubka booskiisa asalka ah), gawaarida gawaarida oo dhan si aad u furfuran, dib-u-cesho si ballaadhan u furfuran, ka dibna dib usoo cesho, adigana sida aad caadiga ah u xajiso, goobaha xiran, u tag hawadaada 4 ee aad jeceshahay oo aad isku daydo. Uu rajaynayo in uu u shaqeeyo sida ez siduu igu sameeyay.
1 sano 5 bilood ka hor #875 by PAYSON
Oh, waxaa jira koox dagaal oo ah maraakiibta WWII muuqata oo ka baxaya xeebta Australia (YBBN).